एमालेमा स्थिति बिष्फोटक – Nepal Japan
नेपाली समय : 07:41:36
जापानी समय : 10:56:36
Tag: एमालेमा स्थिति बिष्फोटक
एमालेमा स्थिति बिष्फोटक
Posted on September 21, 2016 by krishna
‘उहाँ मात्रै होइन, म पनि बिष्फोटको चरणमा छु । कमरेडहरु, यो अति भयो‘१’ सोमबार बिहान तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा एमाले विदेश विभागको बैठक थियो ।
अध्यक्षता गरिरहेका थिए, वरिष्ठ नेता माधव नेपालले । विभागको जिम्मेवारी बाँडफाँडदेखि समीक्षासम्मको काम सकिए ।
अन्तिममा पार्टीको आन्तरिक राजनीतिबारे विभाग सदस्य खगेन्द्र अधिकारीले कुरा उठाए । सोधे, ‘जेएन कमरडले पार्टी विभाजनतिर गएको कुरा उठाउनुभएको छ । यसअघि तपाईंले पनि त्यसै भन्नुभएको थियो । यी कुरालाई हामी कार्यकर्ताले कसरी बुझ्ने ?
कुरा उठेपछि बैठक सिध्याएर बाटो लाग्न थालेका विभागीय सदस्यलाई माधवले ‘ल सुन्नुस्–सुन्नुस्, तपाईंहरु सबै यता आउनुस्’ भन्दै बोलाउन थाले ।
‘अहिले पार्टीमा चरम गुटबन्दी सुरु भयो । जे कुरा पनि गुटका आधारमा हुन थाल्यो । गुटभित्रका केही निश्चित व्यक्तिहरु हावी हुने र इमान्दार साथीहरु पाखा लाग्ने अवस्था भयो । ईश्वर, पृथ्वी, सुब्बा, शंकर र प्रदीप ज्ञावली यी पाँच जनाको झुण्डलाई अध्यक्षले संरक्षण गर्नुभएको छ । हामीले पार्टी सदस्यताको विवरण माग्दा दिइदैँन ।
जस्तो पायो त्यस्तो मान्छेलाई सदस्यता दिइएको छ । मनलाग्दीसँग संगठन विभाग चलेको छ । यो अवस्थामा मैं पनि विष्फोटको अवस्थामा छ, जेएन कमरेडको कुरा छोडदिनुस् १’
पार्टी विभाजनबारे उठेका प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिलेका अवस्थामा पार्टी विभाजन नगरिहालौं भनेर मात्रै हो, तर विभाजनको स्थितिलाई अध्यक्षको कार्यशैलीले बढवा दिइरहेको छ ।’
नेपालको संविधानबारे भारतसंग छलफल गर्नुपर्ने किन ?
आजको जनआस्था साप्ताहिक बाट
Posted in पत्रपत्रिकाTagged एमालेमा स्थिति बिष्फोटक